Iindaba zesiXhosa, ngo 11:00, 08 eyoMdumba 2019 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba zesiXhosa, ngo 11:00, 08 eyoMdumba 2019
Written by Ashia Nkontsa on 08/02/2019
Ubanjiwe umqhubi otshayise kwindlela ka N2
Ubanjiwe umqhubi ekutyholwa ngelithi ubeqhuba ezitshize kanobom ngobhelu lomsele waza waya kutshayisa kwindawo ekwenzeke kuyo ingozi kuhola wendlela u N2 eKapa. Intloko yezothutho kwiphondo leNtshona Koloni umnumzana Kenny Afrika uthi igosa lesipolisa ebeliye kuhlola umonakalo eHospital Bend ngentsasa yanamhlanje lisinde cebetshu ngethuba umrhanelwa engquzula isithuthi samapolisa phof’eliphose kancinane eli gosa. uAfrika uthi sele ibuyele esimeni esisiso noko ngoku imeko kwaye umqhubi ubanjelwe ukuqhuba ephantsi kwempembelelo yotywala.
uRamaphosa ugxinisisile ekujongeni namatyala orhwaphilizo
Umongameli Ramaposa uvakalise ukuba kuzakubuyiselwa kwakho ibutho elisebenza njengelo lachithwayo loonomadudwane. Ukudize oku kwintetho yakhe engobume belizwe kwakunye namaqhinga buchule okukhawulelana nemingeni elijamelene nayo eli lizwe kubusuku bayizolo. Uthi urhulumente uqgibe kwelokuba aseke eli gunyabantu kwi-Ofisi yomlawuli wezotshutshiso khon’ukuze lijongane namatyala amakhulu orhwaphilizo. Ibutho loonomadudwane elaliswantsulisa abantu abakwizikhundla eziphezulu ababandakanyeka kulwaphulo-mthetho lachitha-chithwa emva kokuba amanye amalungu e-ANC alityhola ngokusebenzisa gwenxa amagunya alo kumatyala ezopolitiko. Umongameli Ramaposa uthi eli butho lizakunceda ekuphandeni amatyala amakhulu afuna ingqwalasela emandla lize lithimbe zonke izinto ezifumaneke ngezenzo gwenxa.
i-Holy Cross ifumene izipho ebahlalini
Banikezela ngezipho zesisa kwanoncedo abahlali kwisikolo i-Holy Cross eZonnebloem kulandela umlilo ogqogqise amagumbi aliqela okufundela kwesi sikolo izolo. Okwakalokunje abafundi basafakwe kwiholo yesikolo lo gama iqhuba intlanganiso phakathi kwenqununu yesikolo nabahlohli. Bangaphezu kwamakhulu amathandathu abafundi kwakunye nabasebenzi abathe bakhutshwa kumasango esi sikolo ngethuba lokuvumbuluka kwalo mlilo ngentsasa yanamhlanje. Unobangela walo mlilo awukaziwa okwangoku. Kutshe igumbi lebakala u-R, elesine kwakunye nebakala lesihlanu, ithala leencwadi kwakunye neleekhompyutha.
I-EUSA emele abafundi ihambise izikhalazo zayo epalamente
Imanyano yabafundi i-Educator’s Union of South Africa inikezele ngoxwebhu lwezikhalazo epalamente. Le manyano ikwenze kanye ngobusku bayizolo ngethuba lentetho engobume belizwe. Phakathi kwezigunyaziso zale manyano kuquka into abayibiza ngokuba kukuyekelelwa kwezinga lemfundo yeli lizwe. Unobhala-jikelele we-EUSA umnumzana Siphiwe Mpongose uthi kungokunje inkqubo yezemfundo ijongene neengxaki ezimandla eziyisa emhadini, kwaye ufuna ukufakana imilomo nomongameli khon’ukuze bashukuxe eminye yemiba etshis’ibunzi. Uthi okwakalokunje abakafumani sihoyo kwisebe lezemfundo likazwelonke nangonanje bejamelene nenkqubo yemfundo ef’amanqe ekufuneka bayihlohle kubafundi. Uthi inkqubo yakalokunje ayivelisi ziqhamo nakubanje ootitshala benomthwalo onzima wokuvelisa iinkokheli zangomso kananjalo ebalula nezinga lokupasa leepesenti ezingamashumi amathathu njengokudlala nje upuca ngemfundo yabantwana.